Soo dejisan PDF24 Creator 9.1.1 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: PDF24 Creator
PDF24 Creator – xal wax ku ool ah si loo abuuro loona beddelo faylasha PDF. Software wuxuu abuuri karaa dukumintiyada PDF inta badan codsiyada taageera waxyaabo daabacan, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad doorato faylka oo aad ku daabacdo qoraalka sawirada. Qorshaha PDF24 wuxuu ka kooban yahay modul-dhajiye loogu talagalay inuu arko, abuuro, beddelo, beddelo, isu-rogo ama kala-qaybiyo faylasha PDF iyo sidoo kale inuu soo saaro bogga lagama maarmaanka ah ee dukumeentiga. Software wuxuu bixiyaa ilaalinta sirta ah ee faylasha ka soo horjeeda aragtida aan rasmiga ahayn ama daabacaada aan la fasaxin. PDF24 Creator wuxuu awood u leeyahay inuu abuuro oo maamulo shahaadooyinka, qabashada shaashadda si loogu wareejiyo waxyaabaha la qabtay ee dokumentiyada PDF iyo xakamaynta tayada ama xajmiga faylka la jabiyay. Sidoo kale, PDF24 Creator ayaa leh dhowr goobood oo si sahlan loo isticmaali karo interface.
Abuuri oo beddelo PDF
Ku beddel faylasha PDF
Soo saar boggaga dukumeentiga
Isku duwo oo kala qaybi faylasha PDF
Soo dejisan PDF24 Creator
Faallo ku saabsan PDF24 Creator
PDF24 Creator Xirfadaha la xiriira
Dib-u-cusboonaysiinta HDD – waa qalab loogu talagalay soo celinta wadnaha adag. Software-ka wuxuu la shaqeeyaa nidaamyo faylal oo kala duwan wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad iskaan geliso kumbuyuutarka adag ee waxyeelada ama khaladaadka.